Dental Equipment Mugadziri, Dental Handpiece | YAYIDA
YAYIDA Dental Medical Kambani inyanzvi mukumhanya uye yakaderera yekumhanyisa mazino handpiece uye kugadzirwa kwezvikamu.
Dental Led Chiedza
YAYIDA - Inyanzvi yekugadzira mazino emidziyo yemeno handpiece, mazino chigaro uye mazino LED mwenje kubvira 2006.
Nyanzvi mune mazino akakwira kumhanya uye yakaderera kumhanya handpiece.
YAYIDA Dental Portable 1: 1 16: 1 1: 5 contra angle inononoka kukurumidza ruoko chidimbu Magetsi Mota LED Brushless yemagetsi micro mo
1. Electric Motor Wide yakawanda yekukurumidza kugadzirisa mabasa.Zvichienderana nekushandiswa, kumhanya kunogona kugadziridzwa kubva pa100 kusvika 200,000 rpm neakasiyana mazino emaoko!2. Electric Motor Lightweight uye compact ine yakakwirira torque.Ergonomic yakagadzirirwa kureba uye uremu kuderedza kuneta panguva refu yekushanda. Iyo mota inogona kuitwa sterilized ne autoclaving!
YAYIDA Dental Ultrasonic Scaler Mazano Kuyera Periodontics Endodontics yehuni Ems Satelec DTE
1. Yakagadzirwa kubva kuHigh-Quality Medical Grade Stainless Steel.2. High Degree ye Precision uye Flexibility paunenge uchiitisa Clinical Procedure3. High Degree yeAesthetic uye Corrosion Resistance.
YAYIDA mazino Kurapa Chiedza Optical Fiber Guide Girazi Mazano
1. Zvinoenderana neakasiyana mashandisirwo, ane hunyanzvi dhizaini uye yakapfava kugadzira, tichishandisa tekinoroji yepamusoro, tinogona kupa akasiyana girazi optical fiber zvigadzirwa, ine transmissivity inopfuura 56% pamamita.2. Yakagadzirwa ne high transparent fiber nesimbi.3. Autoclavable yekudzokorora kushandiswa.
YAYIDA Dental Lab Micro Mota INSIMBA 90 +102S Handpiece 35000rpm Inotakurika Micro Motor
1. Manicure drill yakashongedzerwa ine compact uye simbi simba rekudzora unit ine kumberi / reverse basa, kugadzirisa kutenderera kumhanyisa, nzira yekutsiva nyore uye nekukurumidza kutsiva mabheti, inogadzirisa yakavimbika mucheki mumuromo, ichidzivirira kuti isatendeuke panguva. oparesheni.2. Iyo drill handpiece ine yakakosha mhepo yekutora yekutonhodza iyo micromotor, kudzivirira kupisa uye kuve nechokwadi kugadzikana kushanda.3. Slim design simbi nozzle yekubata zvakakwana. Iyo handpiece inosanganisira 4 mabearings ayo anovimbisa kusununguka kwemahara uye yakakwana concentricity yekugadzirisa pamusoro pembambo yechipikiri yakatsetseka.
YAYIDA kambani ine imwe inofarira timu yekutengesa uye mushure-kutengesa sevhisi. Panguva imwecheteyo, ipa imwe yekumira kutenga.
Iyo kambani inoenderera mberi "Hunhu kutanga, Sevhisi kutanga". Shingairira kubva kunze kwenyika, maturusi, zvigadziriso uye kuyerwa, kuyedza nepatinogona napo kuti zvigadzirwa zvedu zvisvike kune zvemhando yepamusoro zvigadzirwa zvakafanana pasi rose.
Kambani inoita kugadzirwa kwe ISO13485, kusimbirira kugadzira zvimwe zvigadzirwa zvepasirese. Uye isu tinopa OEM / ODM sevhisi.
Kunze kwekunaka kwedu pabhizimusi reODM.
Isu tinototumira mazana ezvigadzirwa zvedu kune.
Yakanyanya chigadzirwa chemhando yekudzora system.
Yese purojekiti yatinoshanda pairi inotariswa kuvimbiswa kwemhando.
YAYIDA mazino kambani nyanzvi mukumhanya kwakanyanya uye yakaderera yekumhanyisa mazino handpiece, kutsvagisa nekuvandudza nhengo itsva dzemazino uye zvigadzirwa.
Kambani yeYAYIDA ine mhando dzakasiyana dzeNomuRADS muchina kubva kuJapan, inogona kusangana nemutengi akasiyana chaiwo machining masevhisi.Kune zvigadzirwa zvemutengi zvakakosha, isu tinosimbirira kuti hapana veruzhinji uye hapana kutengesa kune vamwe vatengi, kuve bhizinesi rakavimbika.
Tinoda hupenyu, uye tinoda indasitiri yemazino. Tinovimba kuti zvigadzirwa zvedu zvemazino zvinogona kuita kuti vanachiremba uye tariro yevarwere ive yechokwadi zviri nyore----Ita mazino ane hutano.
Kambani inoita kugadzirwa kwe ISO13485, kusimbirira kugadzira zvimwe zvigadzirwa zvepasirese.
Shamwari dzedu dzinouya kuzoshanyira fekitori yedu, uye dzinoda kugadzira inotungamirwa yakakwira yekumhanyisa handpiece odha uye yakaderera yekumhanyisa handpiece odha. Vanofara nemucheka wedu wemazino uye basa redu. Isu tine chokwadi chekuti zvichave kwenguva yakareba corperation. Kugutsikana kwemutengi kuchava kukurudzira kwedu, ticharamba tichivandudza mhando uye sevhisi.
Kana uine mimwe mibvunzo, tinyorere